न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अब आधा रातमा मिटिङ बस्दैन : ओमप्रकाश मिश्र [भिडियो अन्तर्वार्ता]
भदौ २६, २०७५| प्रकाशित १९:३५
सोमबार मात्र संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत अनुमोदन हुँदै सर्वोच्च अदालतको २८औं प्रधानन्यायाधीशका बनेका छन्, ओमप्रकाश मिश्र। हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो साख राख्दै कायम राखेको सर्वोच्चको नेतृत्व भाग्यवश मिश्रले ४ महिनाका लागि पाएका हुन्। उनीभन्दा वरीयतामा माथिल्लो क्रममा रहे पनि दीपकराज जोशी अन्तिम समयमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिवाट अस्विकृत हुँदा मिश्रले नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए।
प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी पदमा जाने, राजनीतिक तहसँग मिलेमतो हुने, प्रधानन्यायाधीशकै दोहोरो नागरिकता र प्रमाणपत्र जस्ता विवादले केही वर्षदेखि सर्वोच्चको छवि धूमिल हुँदै गएको छ। सर्वोच्चको इतिहासमै पहिलो पटक बहालमा रहेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरुले इजलास र पेशी बहिष्कारसम्म आन्दोलन गर्न बाध्य भए। यस्तो तरल अवस्थामा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न आएका मिश्रमाथि अवसर र चुनौती दुवै छ। चुनौती यसको साख टिकाएर बदनाम नभई बिदा हुनुमा छ भने छोटो अवधिमै केही काम गरेर देखाउने अवसर उनीसँग छ।
यिनै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रसँग नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवादादाता दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
भाग्यवश चार महिनाको कार्यकालसहित सर्वोच्चकाे नेतृत्वमा आउनुभयो। देखिनेगरी दीर्घकालीन महत्व राख्ने कस्ता काम गर्ने सोच राख्नुभएको छ?
सुरुमा त म छोटो अवधिका लागि सर्वोच्चको नेतृत्वमा आइपुगेको हुँ। यस अवधिमा धेरै काम गर्न सम्भव नभए पनि सुरुवात गर्ने मेरो योजना छ। यीमध्ये पेशी व्यवस्थापन र जनतालाई प्रभाव पार्ने काम थाल्ने सोच बनाएको छु। यसका लागि हामी अटोमेसनमा जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हिजो मात्र एउटा समिति गठन गरिएको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वका रजिस्ट्रार र सहरजिस्ट्रारहरु रहेको उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै पेशी प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने नभई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी तोकिन्छ।
समितिले दिएको सुझाव अनुसारको कार्यक्रम बनाएर मुद्दा तोक्ने, त्यसको फैसला छिटोछरितो गर्नका लागि वर्गीकरण गरी पेशी तोक्ने व्यवस्थापनमा जुट्नेछु। मुद्दाका पक्षहरूसँगको व्यवहार सुमधुर कायम गर्ने, सञ्चार जगत्‌सँग फरक बुझाइ हुन नदिन आवश्यक पहल गर्ने हाम्रो तत्कालीन योजना रहेको छ।
हरेक प्रधानन्याधीशले सपथ खानेबित्तिकै भ्रष्टाचार रोक्छु त भन्छन्, तर त्यहाँ गइसकेपछि आफू विभाजित भएर जानुहुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न तपाईंसँग त्यस्तो विशेष के योजना छन्?
मसँग समय त कम छ। तर, राम्रो कामको सुरुवात गर्ने हो भने त्यसको नतिजा एक-दुई दिनमा नआए पनि कालान्तरमा आउनेछ भन्ने विश्वास छ। जहाँसम्म बिचौलियाहरूको कुरा गर्नुभयो। अदालतमा प्रशस्त छन् भन्ने यहाँहरुले नै भन्दै आउनुभएको छ। मैले भेटेको त छैन तर सुनेको छु। अदालतबाट गठन भएका प्रतिवेदनहरुमा पनि यो कुरा उल्लेख भएकाले छन् भन्ने नै विश्वास गर्नुपर्यो। मिडियासँग मेरो अनुरोध छ कि यस कामका लागि मलाई सहयोग गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो काम अदालतमा देखिएको छ भने त्यसको प्रवृत्तिलाई निर्मूल गर्ने कामको थालनी गर्छु।
अदालतमा अहिले न्यायाधीशहरूको बीचमा बेमेल देखिएको छ। त्यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ?
त्यसको केही छैन। मैले त्यस्तो पाएको छैन।
गोपाल पराजुलीको पालामा नागरिकता विवाद आउँदा अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको आन्दोलनसमेत गरे। त्यसलाई के भन्ने त। यस्तो प्रकारको गुट अब सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन?
यस्तो अवस्था कहिल्यै आउनेछैन। पहिले जे थियो मेरो कार्यकालमा त्यस्तो हुन दिनेछैन। यसमा तपाईं ढुक्क भए हुन्छ। सबै श्रीमान्‌हरुले समान रुपमा मुद्दा हेर्दै अदालतलाई न्यायको केन्द्र बनाउनुहुनेछ। अहिले जसरी दीपकराज जोशी आएर मलाई स्वागत गर्नुभयो। यो नै हाम्रो मिलेमतो हो।
स्वागत त गर्नुभयो तर उनले पद छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा उठेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
हामीबीच त्यस्तो केही छैन। त्यसैले आशंका नगरौं। यो हाम्रो काम होइन, जनताको काम हो। हामी जनताले दिएको करबाट तलबभत्ता खाएर बसेका छौं। यदि जनताप्रति नै अनुत्तरदायी भयौं भने हामी दायित्वबाट विमुख हुनेछौं। त्यसैले यस्तो कुरा कहीँ कतै पनि देखिनुहुन्न। हामी जनताको काममा समर्पित हुने मात्र हो।
यो नियुक्तिसँगै न्याय परिषद्‌को अध्यक्ष पनि हुनुभयो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्नुपर्नेछ। नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ। तर, अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक आस्थासँग जोडिने र विवादित हुने गरेका छन्। यसलाई रोक्न के छन् योजना?
प्रधानन्यायाधीशले चाह्यो भने धेरै कुराहरू रोक्न सकिन्छ। आफ्नो क्षमता पूरा उपयोग गर्नेछु। न्यायाधीश नियुक्त अब पारदर्शी र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुन्छ। न्याय परिषद्‍का कामकारबाही पनि पारदर्शी हुन्छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्ने कार्य अब सुरु हुन्छ। न्यायाधीशहरुको कामको अनुगमन गर्ने संयन्त्र अब विकास हुन्छ।
अघिल्लो पाला आधा रातमा राजनीतिक व्यक्तिहरू सँगै राखेर नियुक्ति भयो। अब त्यो अवस्था आउँछ कि आउँदैन?
मैले पनि यस्ता कुराहरू मिडियाबाट मात्र सुनेको हुँ। यसबारे त मलाई पनि थाहा छैन। तर मेरो कार्यकालमा त्यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ काम गर्दा ढिलो हुन्छ त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्दछ। तर बेलुकी मुद्दा छिन्ने बेलामा ९ बजेसम्म बसेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई लिएर आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन तर राति अबेर बस्दैमा गलत कार्य हुन्छ भन्ने होइन। कुनै पूर्वाग्राह राखेर कुनै काम गरिनेछैन। आधा रातमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि अब मिटिङ बस्दैन। त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्छन् तर नियन्त्रण हुँदैन। न्यायालयको बेथिति किन यसरी मौलाइहेको छ?
न्यायलयमा हुने अनियमितता मात्रै होइन ढिलासुस्ती पनि कम गर्नुपर्ने गुनासो छ। मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको २५ पेजको कार्यविधिमा यी सबै कुरा उल्लेख गरेको छु। त्यसमा विस्तृत रुपमा कार्ययोजना समेत रहेको छ। सर्वोच्चको रणनीतिक योजनाले पनि यसलाई महत्व दिएको छ। अदालत जनआस्थामा रहने संस्था भएकाले यहाँ भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन। त्यसको नियन्त्रणका लागि म मेरो कार्यकालमा कठोर भएर काम गर्नेछु।